နေ့စဉ် ရေဒီယိုသတင်း (အသံဖိုင် ) ဒီဇဘာင်္လ၊ ၂၀၂၁
Labels: 2021, Audio, mm, ဒီဇဘာင်္လ, အသံဖိုင်များ
Today's News (Quick Search ) December, 2021
2021: Myanmar's Post-Coup Bloodshed Eclipsed Other Conflicts, Violence in Southeast Asia BenarNews
BANGLADESH Cox's Bazar: Rohingya Christian beaten by refugee camp authorities - AsiaNews AsiaNews
Boat with 120 Rohingya refugees disembarks in Indonesia port | The Independent The Independent
Burmese court jails celebrities who backed anti-coup protests | Myanmar | The Guardian The Guardian
Christmas eve killings reinforce views of 'evil' Myanmar military - Al Jazeera Al Jazeera
EU backs international arms embargo after killings in Myanmar | European Union News | Al Jazeera Al Jazeera
EU readies more sanctions on Myanmar over Kayah state killings - Al Jazeera Al Jazeera
'In the name of humanity', Indonesia welcomes Rohingya refugees found adrift on broken ... South China Morning Post
Indonesia navy ship tows boat with Rohingya refugees to port - CNA CNA
Indonesia relents on plan to push back boat carrying 100 Rohingya refugees after outcry ... The Guardian
Indonesia says it will allow stranded Rohingya boat to seek refuge - NBC News NBC News
Indonesian Navy ship tows boat with Rohingya refugees to port - The Bharat Express News The Bharat Express News
Myanmar emerges as one of world's biggest drug hotspots | Military Coup | Latest English News YouTube
Myanmar Junta Orders Judges to Ignore Correspondence From International Courts - The Diplomat The Diplomat
Myanmar military reverts to scorched earth tactics, massacres - YouTube YouTube
Myanmar military reverts to strategy of massacres, burnings - Vanguard News Vanguard News
Rohingya Muslims reach Indonesia port after month at sea in damaged boat - TRT World TRT World
Rohingya refugees brought ashore after dramatic Indonesia rescue - Al Jazeera Al Jazeera
Stricken boat with over 100 Rohingya allowed to dock in Indonesia - Today Online Today Online
The UN has blamed the killings on the military - Balkan Travellers Balkan Travellers
Labels: 2021, December, en, Quick Search, Today's News
Senior Gen. Min Aung Hlaing, Myanmar’s military commander in chief, duringaparade for the 76th Armed Forces Day in Naypyidaw, the capital, in March.Credit...EPA, via Shutterstock
Labels: 2021, Article, en, Military Equipping, NY
ယေန့ သတင်း( အမြန်ရှာရန် ) ဒီဇင်ဘာလ၊၂၀၂၁
ရက်စွဲအလိုက် သတင်းများကို ဤနေရာတွင် ဝင်ရောက် ရှာဖွေနိုင်ပါ သည်။ ( ကလစ်လုပ်ပြီး ဖတ်ရှုရန် )
ပီဒီအက်ဖ်နဲ့ဆက်စပ်တယ်ဆိုပြီး ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကို သက်သေမခိုင်လုံ လို့ ပြန်လွှတ်-BBC
ကရင်နီပြည်နယ်တွင်း ဒေသတချို့ကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဘက်က ပြောလာ - BBC
ကရင်နီစစ်ရှောင်တွေအတွက် အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးအကူအညီတွေ လိုအပ်နေ- BBC
လေးကေ့ကော်တိုက်ပွဲ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့အဖြေရှာဖို့ ထိုင်းတိုက်တွန်း- BBC
အပစ်ရပ်စာချုပ် ချိုးဖောက်ရင် တုံ့ပြန်မယ်လို့ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကို စစ်ကောင်စီသတိပေး- BBC
ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကိုအဂတိမှု ၆ မှု အတွက် ထောင်ဒဏ် ၁၈ နှစ် ချမှတ်- BBC
အရပ်သားတွေအပေါ် ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်မှုတွေကို လက်သင့်မခံနိုင်ဘူးလို့ အီးယူပြော- BBC
မန္တလေးတိုင်း လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကို ထောင်ငါးနှစ်ချ- BBC
လေးကေ့ကော်ဒေသထဲမှာ တပ်ခွဲမှူးတစ်ဦးအပါအဝင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၇ ဦးကို KNLA ဖမ်းမိ- BBC
ချောင်းဦးမှာ ဒေသခံ PDF တွေနဲ့ စစ်ကောင်စီ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ် - BBC
စစ်ကောင်စီကို လက်နက်ခဲယမ်းရောင်းချမှု ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ရေး EU ထောက်ခံ- VOA
၂၀၂၁ ခုနှစ် မြန်မာသတင်း ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်- VOA
ထန်တလန်မှာ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနဲ့ နေအိမ် ၅၀ ကျော် မီးရှို့ခံရ -VOA
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျတဲ့ ၂ဝ၂၁- RFA
ထန်တလန်မှာ အဆောက်အအုံ ၅၀ ခန့် မီးထပ်လောင်- RFA
NCA ပါစည်းကမ်းချက်တွေ မလိုက်နာရင် အရေးယူမယ်လို့ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ ထုတ်ပြန်- RFA
NUG ရုပ်သံတင်ဆက်သူ ကိုအောင်နေမျိုးရဲ့ အဖမ်းခံထားရတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အဆက်အသွယ်မရသေး- RFA
စစ်တပ်ကသာ အာဏာသိမ်းပြီး NCA ကို စတင်ချိုးဖောက်ကြောင်း KNU တုံ့ပြန်- RFA
ထားဝယ်တက္ကသိုလ် သမဂ္ဂဝင်တစ်ဦးနဲ့ ကျောင်သူဟောင်းနှစ်ဦး ထောင်နှစ်နှစ်စီ ချမှတ်ခံရ-RFA
ရန်ကုန် လှိုင်မြို့နယ်က ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦး ပစ်သတ်ခံရ-RFA
မြန်မာစစ်တပ်ကို လက်နက်တပ်ဆင်ပေးနေသူ- RFA
ရေဦးမှာ စစ်ကောင်စီတပ်ကင်းလှည့်ချိန် မိုင်းဆွဲခံရပြီး သုံးဦး သေဆုံး- RFA
အာဏာသိမ်းတာကိုဆန့်ကျင်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို ထောင်ဒဏ် ဆက်တိုက်ချမှတ်- RFA
အရပ်သားတွေကို တိုက်ခိုက်မှုအတွက် စစ်ကောင်စီကို EU ရှုတ်ချပြီး အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုတိုးမြှင့်မည်- RFA
နှမ်းခါးရွာကို စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေ ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်လို့ ဒေသခံတစ်ဦး သေဆုံး- RFA
အစုအပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုတွေအပါအဝင် သေဆုံးထိခိုက်မှုအများဆုံး ဒီဇင်ဘာလ- RFA
မတရားလုယူခံရတဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို တွန်းလှန်ဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌ တိုက်တွန်း-RFA
မူဆယ်မြို့မှာ ပြည်သူ့စစ် အချင်းချင်း ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီး တစ်ဦး သေဆုံး- RFA
အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်မှု စစ်တပ်က တာဝန်ခံဖို့ ကရင်နီ ၆၇ ဖွဲ့တိုက်တွန်း- RFA
မန္တလေးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင် ကျန်းမာရေးမကောင်း-RFA
ယူကရိန်းအရေး အမေရိကန်နဲ့ ရုရှားသမ္မတ ၂ ဦး တယ်လီဖုန်းဆက်ဆွေးနွေး-VOA
အင်ဒိုနီးရှား ပင်လယ်ပြင်က ရိုဟင်ဂျာ ၁၂၀ ကမ်းကပ်ခွင့်ရ -VOA
ကမ္ဘာတဝန်း နှစ်သစ်ကြိုပွဲတွေ ကိုဗစ်ကြောင့်ထိခိုက် - VOA
ဆူဒန်စစ်အာဏာသိမ်း ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲ နှိမ်နင်းခံရ ၄ ဦးသေ - VOA
Omicron အန္တရယ်ကြောင့် နှစ်သစ်ကူးပွဲတွေမှာ လူမစုဖို့ အမေရိကန် သတိပေး - VOA
Labels: 2021, mm, ဒီဇင်ဘာလ, ယနေ့သတင်း အမြန်ရှာရန်
New Light of Myanmar ( English Newspaper )2020 December.
Labels: 2021, December, en, Global New Lights of Myanmar
ယနေ့သတင်းစာများ ( ကြေးမုံ+ မြန်မာ့အလင်း ) ဒီဇင်္ဘာ လ ၊၂၀၂၁
၂၀၂၁ ခု ဒီဇင်ဘာလ၊ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ
Labels: 2021, mm, ဒီဇင်္ဘာလ, မြန်မာ့အလင်း, မြဝတီ, သတင်းစာ, ကြေးမုံ
UN Calls for Investigation After Dozens Massacred in Myanmar
The United Nations is calling forathorough and transparent investigation into the massacre of at least 35 people, including women and children, in Myanmar's eastern Kayah state. The incident, that's reported to have taken place on December 24, came to the world's attention after photos taken by the Karen Human Rights Group showed bodies on the backs of trucks, burnt beyond recognition. While Myanmar's military stands accused of another mass killing, the country's state media is reporting that the army had shot and killed terrorists. International condemnations are in order, but are these enough to change the reality on the ground?
Adviser to Genocide Watch
Co-founder of the Free Rohingya Coalition
Labels: 2021, en, Htwe Htwe Thein, Massacred, Maung Zarni, mm, Myanmar, Nay San Lwin, News, TRT, Video